ॐ लेखेर सेयर गर्नुहोस, ९ लाख बलेको दियोलाई दर्शन गरौँ, तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ । – Khabar Patrika Np
ॐ लेखेर सेयर गर्नुहोस, ९ लाख बलेको दियोलाई दर्शन गरौँ, तपाईको मनोकामना पुरा हुनेछ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख २६, २०७८ समय: २१:४५:३४
धनकि खानी,धनको देवी मानिने लक्ष्मी मातालाई प्रसन्न गर्नको लागि मानिसहरु अनेक प्रकारको उपाय र कार्यहरु गर्ने गर्दछन् ।महालक्ष्मीको पूजा र आराधना गर्नाले धन र समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास समेत रहेको छ ।हिन्दु धर्मअनुसार, यदि तपाई देवी लक्ष्मीलाई खुशी राख्न र उनलाई आफ्नो घरमा आ’कर्षित गर्न सक्ष’म हुनुभयो भने धन र समृद्धिले तपाइलाई कहिले पनि छोड्ने छैन ।देवी लक्ष्मी धन, भाग्य, प्रेम र सौन्दर्यकी देवीको रुपमा मानिन्छ। उनलाई चंचल स्व’भावको पनि मानिन्छ किनकि उनि एकै ठाउँमा स्थायी रुपमा बस्न सक्दिनन् भन्ने वि’श्वास पनि रहेको छ ।
तपाईले दैनिक गर्ने केही कार्यहरुले लक्ष्मी माता प्र’सन्न हुने र जीवनमा प्र’शस्त धनलाभ गर्ने अवसर मिल्ने गर्छ। आज हामी तपाईहरुलाई ल’क्ष्मीको कृपा मिल्ने र धनलाभ हुने ५ सं’केतहरु बताऊन जाँदै छौँ।१. यदि तपाईले सपनामा पानी, हरियाली र लक्ष्मीको वहन उल्लु देख्नुभएमा भाग्य बदलिने र प्र’शस्त धन कमाउने संकेत रहने गर्छ।२. यदि तपाईको घर वा कार्यालयमा अकस्मात उल्लु आयो भने सम्झिनुस निकट भविष्यमानै धन प्राप्त गर्ने अवसर मिल्नेछ।
३. विशेषगरी शुक्रबारको दिन लक्ष्मी पूजा गर्ने भएकाले यस दिन तपाईलाई कोही महिलालले सिक्का पैसा दिएमा निकै शुभ हुने र प्रशस्त धन कमाउने अवसर मिल्ने गर्छ।४. तपाईले राती सुतेको बेला सपनामा सेतो र पहेंलो सर्प देख्नुभयो भने छिट्टै धनि बन्ने योग छ भन्ने बुझ्नुहोस्। यसकासाथै यसले तपाईको स्वा’स्थ्यमा समेत ठूलो सुधार आउने संकेत गर्छ।५. हरेक व्यक्तिहरु सर्प देख्ने बितिकै डराउने गर्छन। तर सर्प र धनसँगको अत्यन्तै नजिक हुन्छ। त्यसैले घरमा सर्प आयो र तपाईलाई बेर्यो भने निकै संकेत रहने गर्छ। यस्तो अवस्थामा तपाई छिटै धनि बन्न सक्ने र घर वरिपरि केहि खजाना हुनसक्छ ।
यो पनि पढ्नुहोला !!!उसो त भूत भन्ने वित्तिकै सबै ड’राउने गर्दछन् । आखिर भूत कसैले पनि देखेको हुँदैन तर पनि भूत भन्ने वित्तिकै प्राय सबैका सातो जान्छ । तर नेपालमै यस्तो परम्परा छ जहाँ भूतहरुको मेला लगाउने गरिन्छ । सिरहास्थित कमला नदीमा प्रत्येक वर्ष भूत मेला लगाउने गरिन्छ । हरेक वर्षको विजया दशमीको आगमनसँगै धामी झाँक्री बोक्सा बोक्सी सक्रिय हुन्छन् । भन्ने विश्वासका साथ आश्विन अमावस्यालाई तन्त्र सिद्धिका लागि सर्वोत्तम मानिदै आईएको छ